တပ်မတော်ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီး ပျက်ကျ၊ သုံးဦး သေဆုံး
ရဟတ်ယာဉ် ပျက်ကျမှုအခြေအနေအား တာဝန်ရှိသူများက စုံစမ်း ဖော်ထုတ်နိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည်
ဒေါ်လာ ၂ ဘီလျံကျော် တန်ဖိုးရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်း ၁၀၀ ကျော်ကို ကော်မရှင်သစ်က စစ်ဆေးပေးရမည်
မကြာမီက ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်အနေဖြင့် အတည်ပြုချက်ရရှိရန် စောင့်ဆိုင်းနေသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်း ၁၀၀ ကျော်ကို စစ်ဆေး အတည်ပြုပေးရမည် ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလတွင် အစိုးရသစ် တာဝန်ယူပြီးချိန်မှ စတင်ကာ တင်ပြထားသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံကိန်း ၁၀၂ ခုရှိပြီး တန်ဖိုးအားဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ ဒသမ ၃.
ရက် ၁၀၀ စီမံချက်ကာလအတွင်း ရန်ကုန်၌ မူးယစ်ဆေးဝါး ဖမ်းဆီးရမိမှု ငါးဆတိုးလာ
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အထိ မူးယစ်ဆေးဝါးမှု ၂၂,၀၄၄ မှု ဖမ်းဆီးမိခဲ့သည့်အနက် ၂၀၁၆ ခုနှစ် မေလအထိ စိတ်ကြွ ဆေးပြား ၄၃ သန်းအထိ ဖမ်းဆီးရမိထား
ကလေးသူငယ်ငါးဦးတွင် တစ်ဦးမှာ အလုပ်လုပ်နေရပြီး ကျောင်းနေအရွယ်ထက်ဝက်မှာ ကျောင်းထွက်နေရ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကလေးသူငယ် ငါးဦးတွင်တစ်ဦးမှာအလုပ်လုပ်နေကြရပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ကလေးသူငယ် အလုပ်သမား စုစုပေါင်း တစ်သန်းခွဲကျော်ရှိနေကြောင်း ကုလသမဂ္ဂက ကလေးသူငယ် ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (ယူနီဆက်)က ကမ္ဘာ့ကလေးအလုပ်သမားစေခိုင်းမှုဆန့်ကျင်ရေးနေ့ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် မြန်မာနှင့် တူရကီ ဆွေးနွေး
နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးနှစ်ဦးဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး နှစ်ဖက်ရပ်တည်ဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်အပြန်အလှန်ချီးကျူးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
အစိုးရသစ်ကို စိန်ခေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံသားစိစစ်မှု လုပ်ငန်း
ဉာဏ်လှိုင်လင်း ရေးသားသည်။ လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု၊ ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုများအပြီး ဒီဘက်ခေတ်မှာ မြန်မာသံဃာတော်အတော်များများ တခဲနက် ပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ “အမျိုးသားရေး” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ပါပဲ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ကစတင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံအတွင်းရှိ မြို့အတော်များများကို ကူးစက်ပျံ့နှံ့ခဲ့တဲ့ မတူညီတဲ့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတွေအကြား ဘာသာရေးဆန်တဲ့ ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူဦးရေသိပ်သည်းဆများပြားတဲ့ အိန္ဒိယ၊.
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကို အဆောတလျင် လုပ်ဦးမည်မဟုတ်
လက်ရှိအချိန်တွင် ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်နေ
ငြိမ်းစုစီဥပဒေအသစ်အပေါ် လွှတ်တော်နှစ်ရပ် သဘောထားကွဲလွဲနေသဖြင့် အတည်မပြုနိုင်သေး
လွှတ်တော်နှစ်ရပ် သဘောကွဲလွဲမှုများကြောင့် လာမည့်တစ်လကျော်ချိန်မှ ပြန်လည်ကျင်းပမည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးရောက်မှသာ အတည်ပြုနိုင်တော့မည် ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်က ငလျင်ဒဏ် ခံနိုင်ရဲ့လား
အရည်အသွေး မပြည့်ဝသည့် အဆောက်အအုံများ ရှိနေသည့် ရန်ကုန်၌ ငလျင်ကြီးတစ်ခု လှုပ်ခတ်လာပါက ထိခိုက်သေဆုံးမှု များပြားမည့်အရေးကို ပညာရှင်များက စိုးရိမ်လျက်ရှိသည် ထွန်းခိုင် ရေးသားသည်။ ရန်ကုန်မြို့မှာ နေထိုင်ဖို့ တိုက်ခန်း ရွေးချယ်ကြသူတွေအတွက် ထည့်သွင်း စဉ်းစားစရာအချက်တွေက အတော်များလှသည်။ ရေအလွယ်တကူရနိုင်လား။ သွားရေလာရေးလွယ်ကူရဲ့လား။ အမြဲတမ်းဆူညံနေတတ်တဲ့ အလှူခံဌာနတွေနဲ့ ဝေးရဲ့လား။ လုံခြုံရေးအရ.